Maurizio Sarri oo si caro leh kaga hadlay guuldaradii xalay kasoo gaartay kooxda Wolves – Gool FM
(Chelsea) 06 Dis 2018. Macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri ayaa si caro leh kaga soo hor muuqday saxaafada, kadib guuldaradii lama filaanka ahayd ee kaga soo gaartay 2-1 kooxda Wolves kulankoodii 15-aad ee horyaalka Premier League.
Maurizio Sarri ayaa kadib guuldarada soo gaartay kooxdiisa Chelsea wuxuu u sheegay saxaafada:
“Waa natiijo niyad jab ah, waxaan sameenay qaab ciyaareed cajiib ah qeybta hore ee ciyaarta, waxaana awoodnay inaan dilno ciyaarta, laakiin si lama filaan ah ayuu gool inooga dhashay”.
“Way adag tahay in la fahmo, balse waxaa jirtay waqtiyo aan guul ku gaari karnay kulankan”.
“Waxaan ka war qabaa inaan helnay shan fursadood 10-kii daqiiqo ugu horeesay ee qeybtii labaad ciyaarta, balse kama aanan faa’ideysan”.
Si kastaba kooxda Chelsea ayaa ka dhacday kaalinta afaraad ee dhanka kala sareynta ka dib guuldaradii kasoo gaartay Wolves, waxay soo u ruursadeen 31 dhibcood iyagoo 10 dhibcood u jira hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Manchester City.
“Kubadda cagta kaliya ma ahan goolasha” - Luka Modrić